I-25 Scholarship yaBafundi baseIndiya ukuba bafunde kwelinye ilizwe
Nazi i-25 zokufunda ezimangalisayo zabafundi baseIndiya zokufunda phesheya. Abanye baxhaswa ngokupheleleyo kuzo zombini iinkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala ngelixa ezinye zixhaswa ngemali.
Sizidwelise ecaleni kweenkcukacha zazo ukukunceda ukhethe ukuba yeyiphi (ii) oza kuyifuna.
Eli nqaku linalo lonke ulwazi, oluhlaziyiweyo ngendlela, lwabafundi baseIndiya abafuna ukufunda phesheya ngengxowa mali yokufunda kunye nendlela yokwenza isicelo sobufundi.
Kudala sisekela abafundi bamanye amazwe kule minyaka simahla ekuqinisekiseni ukwamkelwa kunye nezifundo zokufunda phesheya.
Kutshanje siqulunqe inqaku elikhoyo izifundiswa zikarhulumente zokufunda phesheya kwaye ivulelekile kuye wonke umfundi ovela kuzo zonke iimbombo zomhlaba.
Siye saxhasa ukufunda kwi-Intanethi ngamanqaku amaninzi abonisa amathuba okufunda kwi-Intanethi abafundi bamanye amazwe. Esona sikhokelo sithandwayo koku kuvezwa Iinkqubo zasimahla kwi-Intanethi eCanada eziza nezatifikethi wh omnye ubhentsisa iikhosi ezenziwa kwi-Intanethi zabafundi bamanye amazwe kwihlabathi liphela abanezatifikethi ezinokuprintwa.
Kuya kufuneka uyazi ukuba kukho inani le iinkqubo ezikhawulezayo zesidanga kwi-intanethi ungathatha inxaxheba ekufumaneni isatifikethi sedigri ngexesha elincinci.
Apha, sigxile kweli xesha kukunceda abafundi baseIndiya bafake izicelo kwaye baphumelele izifundiswa zokufunda phesheya kwaye sidibanise inani lezifundo zokunceda.
1 Amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo sokufunda kwabafundi baseIndiya ukuba bafunde kwelinye ilizwe
2 Ukufundiswa kwaBafundi baseIndiya baFunda kwelinye ilizwe
2.1 I-Inlaks Shivdasani yeSiseko seScholarships
2.2 IYunivesithi yaseAdelaide Ashok Khurana Scholarship yaBafundi baseIndiya
2.3 I-India yeeNkokeli zeHlabathi zeScholarship
2.4 I-UCD Global Scholarship yaabafundi baseIndiya eIreland
2.5 I-Orange Tulip Scholarship
2.6 ICampus France Charpak Scholarship
2.7 UCharles Wallace India Trust Scholarships
2.8 IBhunga laseBritane IBHASO ENKULU yaBafundi baseIndiya
2.9 Oxford kunye neCambridge Society of India (OCSI)
2.10 IYunivesithi yaseLincoln India Scholarship
2.11 IYunivesithi yeOxford Felix Scholarships kubafundi baseNdiya
2.12 I-UWE yezifundo zamanye amazwe
2.13 IYunivesithi yaseSouthampton LLM International Scholarships
2.14 IYunivesithi yaseSheffield Scholarship
2.15 ISussex Indian Scholarship
2.16 Ubambiswano lweStanford Reliance Dhirubhai lwaBafundi baseIndiya
3 I ngcebiso
Uninzi lwabantu abafuna ukuba zizifundiswa ezinkulu abanakulifezekisa eli phupha ngenxa yomcimbi olula "Isithintelo sezezimali", kulungile enkosi kwizibonelelo zokufunda ezixhaswe ngabantu abathile abazizityebi, iziseko zesisa, urhulumente, kunye neeyunivesithi ezithile onokuthi uye kuzo esikolweni simahla kungafunwanga ntlawulo.
Njengomfundi waseIndiya ofuna ukufunda phesheya kunye nesifundi, kuya kufuneka uyazi ukuba kukho amaxwebhu afunekayo ukuqala isicelo sakho sokufunda, ndiza kubalula apha ngezantsi.
Amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo sokufunda kwabafundi baseIndiya ukuba bafunde kwelinye ilizwe
Kuya kufuneka uthathe iimvavanyo zokungena ezi-TOEFL okanye i-IELTS kunye ne-GRE / GMAT kwaye uneengxelo zamanqaku ovavanyo osele uzifumene.
I-visa yabafundi iyimfuneko njengoko sisazisi esigunyazisa ukuhlala kwakho kwelo lizwe ngelo xesha lesifundo.
Ingxelo yeNjongo (SOP)
Isalathiso okanye incwadi yengcebiso
Uxwebhu lwamava omsebenzi-oku kuyafuneka kwezinye iinkqubo zokufunda ezifana ne-MBA
IKharityhulam yeVita (CV)
Ileta yescholarship (ukuba iyafuneka)
Iinkcukacha zakho zonxibelelwano
Ikhadi le-ID yeinshurensi yezempilo
La maxwebhu afunekayo ahluka ngokwamaziko kunye nenqanaba onqwenela ukulenza ukuze uthathe ixesha lokwenza phambili kwaye uqondise uphando njengokunxibelelana negosa lokwamkelwa kwesikolo sakho okanye umntu ophetheyo kwingxowa mali yokufunda ukuze azi uhlobo lwamaxwebhu oza kuwadinga.
Nje ukuba uwaphathe onke amaxwebhu ayimfuneko, ungaqala izicelo zokufunda kwaye unokuhlala ufaka isicelo sokufumana isibonelelo esingaphezulu kwesinye, enyanisweni kuyacetyiswa ukuba ufake isicelo kangangoko kunokwenzeka ukwandisa amathuba akho.
Zama ukuqala isicelo sakho sokufunda kwangoko kwaye ukwenza oku kuya kufuneka ukuba ube nawo onke amaxwebhu kwaye unxibelelane ngqo nomphathi wezifundo kunye neziko lakho olithandayo.
Njengomfundi waseIndiya ofuna ukufunda phesheya, ndilungiselele ama-25 amathuba okufunda onokukhetha kuwo kwaye ahlaziyiwe.
Ukufundiswa kwaBafundi baseIndiya baFunda kwelinye ilizwe
I-Inlaks Shivdasani yeSiseko seScholarships
IYunivesithi yaseAdelaide Ashok Khurana Scholarship yaBafundi baseIndiya
I-India yeeNkokeli zeHlabathi zeScholarship
I-UCD yezifundo zesidanga sokuqala sabafundi baseIndiya eIreland
I-Orange Tulip Scholarship
ICampus France Charpak Scholarship
UCharles Wallace India Trust Scholarships
IBhunga laseBritane IBHASO ENKULU yaBafundi baseIndiya
Oxford kunye neCambridge Society of India (OCSI)
IYunivesithi yaseLincoln India Scholarship
IYunivesithi yeOxford Felix Scholarships kubafundi baseNdiya
I-UWE yezifundo zamanye amazwe
IYunivesithi yaseSouthampton LLM International Scholarships
IYunivesithi yaseSheffield Scholarship
ISussex Indian Scholarship
Sir Edmund Hillary Scholarship, kwiDyunivesithi yaseWaikato New Zealand
I-International Merit Scholarship, iYunivesithi yaseGloucestershire
UPatrick noKelly Lynch Scholarship
Isikolo seDurham kwiYunivesithi yeShishini iScholarship
Isibonelelo soPhando lweCCS saBaphengululi bamanye amazwe, eTaiwan
IYunivesithi yaseHeidelberg Ph.D. Ubuhlobo eJamani
IYunivesithi yase-GIFU iNgxowa-mali yaBucala yaBafundi beZizwe ngezizwe
Ubambiswano lweStanford Reliance Dhirubhai lwaBafundi baseIndiya
ICornell University Tata Scholarship
Abasetyhini baseAsia kwiNgxowa yeScholarship yeShishini
I-Inlaks Shivdasani yeSiseko seScholarships: Esi sesinye sezona zifundo zibalaseleyo zabafundi baseIndiya zokufunda phesheya kwaye iyafumaneka ukufumana izicelo ezivela kubafundi baseIndiya kuphela ukuba bafunde kumaziko aphezulu aseMelika, aseYurophu nase-UK kwiMasters yexesha elizeleyo, M.Phil, okanye ugqirha. Inkqubo.
Ngenkxaso-mali ephezulu ye-100,000 USD, isifundi esigubungela izifundo ezipheleleyo, i-inshurensi yezonyango, isibonelelo sohambo esivela eIndiya sisiya kwilizwe lokufunda.
Ukuze ufaneleke kule nkxaso-mali kufuneka ube ungaphantsi kweminyaka eyi-30.
IYunivesithi yaseAdelaide Ashok Khurana Scholarship yaBafundi baseIndiya: Le yenye yezifundo zabafundi baseIndiya abafuna ukufunda phesheya.
I-scholarship iyafumaneka kuphela kwiiprogram ze-postgraduate kwaye ixabisa i- $ 30,000 ngonyaka.
Ukuze ufanelekele ukubhalwa kwemali, kufuneka ube ufundile kwaye kufuneka ube neempawu zobunkokeli.
I-India yeeNkokeli zeHlabathi zeScholarship: Le nkcazo iyafumaneka kubo bobabini abafundela isidanga kunye nabaphumelele isidanga abafundi baseIndiya ukuba bafundele IYunivesithi yaseQueensland e-Australia.
I-scholarship iyafaneleka kuphela kubafundi bezobugcisa baseNdiya abazimisele ukuthatha i-grade-grade okanye i-postgraduate kwi-Faculty of Business, Economics, kunye noMthetho kwi-UQ.
Nangona kungekho nqanaba lokusebenza kwinqanaba elithile labafundi elizimisele ukufaka isicelo ngeli thuba, isifundi sinikezelwa ngokusesikweni kumgangatho wokugqwesa kwizifundo ngenxa yoko kuphela abafundi abenza kakuhle kakhulu bahlala bekhethiwe.
I-UCD Global Scholarship yaabafundi baseIndiya eIreland
I-UCD Global Scholarship yaabafundi baseIndiya eIreland: Le nkcazo iyafumaneka kubafundi baseIndiya ukuba bafunde kwiYunivesithi yaseDublin, eIreland.
I-UCD yenye yezona yunivesithi zidumileyo zamanye amazwe eIreland malunga neepesenti ezingama-30 zabafundi bayo bengabafundi bamanye amazwe.
I-Orange Tulip Scholarship Le nkxaso mali iza kwiindidi ezininzi kwaye ivulelekile kubo bobabini abafundela isidanga kunye nabaphumelele eIndiya ukuba bafunde phesheya.
Icandelo ngalinye lineemfuno ezithile kunye neenkqubo zesicelo njengoko uninzi lwamacandelo luxhaswa ngemali ngamaqumrhu ohlukeneyo.
ICampus France Charpak Scholarship: Olu phengululi luvulelekile ukufumana izicelo ezivela eIndiya nakwamanye abafundi bamazwe aphesheya.
Kuvulelekile kuphela kwizifundo zemfundo enomsila kumacandelo amakhulu ezifundo.
Inkxaso mali yokufunda yahlulwe yangamacandelo amabini, iCharpak AME Scholarship egubungela isibonelelo sokuphila sama-700 euros, i-visa yabafundi, kunye ne-Etudes en France yokurhoxisa umrhumo, ukuhlawulwa kwemali yokufunda ukuya kuthi ga kwi-5000 euro, uncedo lokufumana indawo yokuhlala efikelelekayo.
Icandelo lesibini sisibonelelo sokufunda esigubungela iitikiti zomoya zendlela enye kwiklasi yezoqoqosho ukusuka eIndiya ukuya eFrance, i-visa yabafundi, kunye ne-Etudes en France yokurhola umrhumo, kunye nokhuseleko kwezentlalo.
UCharles Wallace India Trust Scholarships: Le nkxaso mali yokufunda iyafumaneka kubafundi baseIndiya kuphela kwizifundo zobugqirha.
Ibandakanya indawo yokuhlala kunye neendleko zokuhlala e-UK, iifizi, kunye negalelo kwiirhafu zamanye amazwe kwaye ayixhasi izifundo zeminyaka emibini okanye iinkqubo njengoko zihlala iinyanga kunye nonyaka ubuninzi.
QAPHELA: Ngenxa yokuhamba kweSikolo saseLondon soBugcisa boBugcisa eBerlin, le nkqubo yokufunda isabambekile ngelixa ixesha lesikolo libuyela eLondon.
IBhunga laseBritane IBHASO ENKULU yaBafundi baseIndiya: Le ngxowa-mali inikezelwa liBhunga lase-Bhritane ngokubambisana nomkhankaso omkhulu wase-Bhritane wokuba abafundi baseIndiya bafunde e-UK.
Isifundi sisika kumacandelo ahlukeneyo kwaye senzelwe kuphela iinkqubo zesidanga sokuqala.
Abafakizicelo kufuneka babenencwadana yokundwendwela yaseIndiya ukuze babenako ukufumana le mfundo.
Oxford kunye neCambridge Society of India (OCSI): Isifundi siyafumaneka kuzo zombini izidanga zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala kwaye sinqumleza uqeqesho ngeendlela ezahlukeneyo.
Iyafumaneka kubafundi baseIndiya ukuba bafunde kwiDyunivesithi yaseCambridge okanye kwiDyunivesithi yaseOxford.
IYunivesithi yaseLincoln India Scholarship: Esi sibonelelo sokufundela asifanelekanga kuphela abafundi baseIndiya kodwa bonke abafundi, abakwamanye amazwe nabasekhaya.
I-scholarship ikwafumaneka kuzo zonke iinkqubo kunye nokufaneleka kweendidi zemfundo ngokuxhomekeke kwimvelaphi yemfundo, umvuzo wekhaya, inkqubo ekujongwe kuyo yokufunda, kunye / okanye ubuzwe.
IYunivesithi yeOxford Felix Scholarships kubafundi baseNdiya: I-scholarship ivulelekile kubafundi baseNdiya ukuba bafunde kwiYunivesithi yaseOxford, kwiYunivesithi yokuFunda, kunye neYunivesithi yaseLondon.
Kuphela ngabafundi abafundela isidanga sokuqala abanelungelo lokufaka isicelo sobufundi.
I-UWE yezifundo zamanye amazwe: Le nkcazo iyafumaneka kumaNdiya nakwamanye amazwe abafundi.
Kuvulelekile kuzo zombini iinkqubo zesidanga sokuqala kunye nezidanga lokuqala.
IYunivesithi yaseSouthampton LLM International Scholarships: Oku kubandakanya zombini izibonelelo kunye nemali mboleko yezifundo zesidanga sokuqala.
Iimali-mboleko zesidanga sokuqala zifumaneka kuphela e-UK nakwi-EU yabafundi abafundela iinkqubo zokufunda kunye nophando lweenkosi.
IYunivesithi yaseSheffield Scholarship: Iyunivesithi ibonelela ngoluhlu lwezifundo zabafundi baseIndiya nakwamanye amazwe kwizifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala.
ISussex Indian Scholarship: Le yenye yezona zifundo zaziwayo zabafundi baseIndiya zokufunda phesheya.
Kungenxa yabafundi abatsha abaphumelele isidanga abanobuzwe baseIndiya kwaye bamkelwe ukuba bafunde ikhosi ye-Master efanelekileyo eSussex. Isifundi sinikezelwa kwimirhumo yokufunda.
Ubambiswano lweStanford Reliance Dhirubhai lwaBafundi baseIndiya: Le nkxaso-mali iyafumaneka kwiNkqubo yeStanford MBA yabafundi baseIndiya ekumele ukuba babehlala kwaye basebenza eIndiya kule minyaka mibini idlulileyo ngaphambi kokufaka isicelo.
Ibandakanya malunga ne-80% yemirhumo yokufunda kunye nenkcitho yamabhaso.
Njengomfundi waseIndiya ofuna izifundiswa zokufunda phesheya, ungakhangela kula mathuba okufunda adweliswe apha ngasentla ukuze wazi ukuba yeyiphi ekufaneleyo. Ungaqala izicelo zazo zonke izifundi ezikwi-Intanethi.
Emva kokuba wamkelwe kwisibonelelo semali yokufunda ukugcina ukuqhuba kakuhle kwizifundo zakho, thatha izifundo zakho nzulu njengokusebenza okuncinci kwezemfundo kunokufumana ukurhoxa kuwe.
Uluhlu lweeNyuvesi zeNkohliso eMelika, e-UK, e-India, eNigeria, nase-Rajasthan
I-12 yeeScholarship eziPhezulu kwi-UAE yaBafundi bamaNdiya
Scholarships yaseNdiya Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo
Scholarships yaseNdiyaUkufundiswa kwaBafundi bamaNdiya phesheyaUkufundiswa kwaBafundi baseIndiya baFunda kwelinye ilizwe
Post Previous:I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi e-Australia kunye neMali yabo yokuFundisa
Okulandelayo Post:IYunivesithi yaseToronto eQhubeka neMfundo | Iinkcukacha ezigcweleyo kunye nokuSebenza